ဖွိုးပွညျ့စုံတို့ ၃ ယောကျကို ရိုကျနှကျဖမျးတဲ့သူကို အရေးယူပေးဖို့ တောငျးဆိုပါတယျ ဆိုတဲ့ ဦးအောငျရငျ – Myanmar News Groups
လတျတလော အနုပညာလောကသာမက မွနျမာတဈနိုငျငံလုံးမှ ပရိသတျတှေ ကွားမှာ နာမညျကွီးသှားတဲ့ အဆိုတျော ဖွိုးပွညျ့စုံ ဆေးအမှု့နဲ့ ဖမျးဆီခံခဲ့ရတဲ့ သတငျးကို ပရိသတျတှေ သိလောကျမယျ ထငျပါတယျ။ အဆိုတျော ဖွိုးပွညျ့စုံ ဘနျကောကျမှဝယျလာတဲ့ ပူရှိနျးသကွားလုံးဘူးကို မှုးယဈဆေးလို့ ယူဆပွီး ဖွိုးပွညျ့စုံနဲ့ သူငယျခငျြး နှဈဦးကို မွနျမာပလာဇာ မှာ မှားယှငျးဖမျးဆီခံခဲ့ရတာပဲ ဖွဈပါတယျ။ဖမျးဆီတဲ့အခါမှာလညျး လူအမြားရှိမှာ ရိုကျနှကျပွီး ဖမျးဆီခဲ့တာပါ။ ၉.၁၀.၂၀၁၉ မှာတော့ အဆိုတျောဖွိုးပွညျ့စုံ တို့ သုံးဦး ကို အပွဈမရှိတာကွောငျ့ လှတျငွိမျးပေးလိုကျတာပါ။ ခဈြပရိသတျတှအေတှကျ အဆိုတျောဖွိုးပွညျ့ စုံတို့သုံးယောကျနဲ့ ပတျသကျပွီး ပွောလာတဲ့ အဆိုတျော ဦးအောငျရငျတို့ အကွောငျးကို ဖျောပွပေးလိုကျပါတယျနျော။
ဦးအောငျရငျ က “အပွဈမရှိတဲ့ ဖွိုးပွညျ့စုံတို့ ၃ ယောကျကို မူးရဈရမျးကား ရိုကျနှကျဖမျးတဲ့ကောငျတှေ အရေးယူပေးဖို့တောငျးဆိုပါတယျတာဝနျခြိနျမှာအရကျနံ့တတထောငျးထောငျးနဲ့လူကွားထဲမှာအခှငျ့မရှိရိုကျဖမျးပွီးသူ့ကိုမှတျထားပွောသေးတယျဆိုတော့ သိပျလှနျသှားပွီ ဒီ လူမဆနျတဲ့ကောငျတှကေိုပွငျးထနျစှာအရေးယူပေးပါ ဒီလိုကောငျတှရေဲတပျဖှဲ့ထဲရှိနရေငျ ပွညျသူတှအေတှကျအန်တရယျကွီးပါတယျ ရဲတပျဖှဲ့လညျးသိက်ခာကပြါတယျ ” ဆိုပွီးပွောထားပါတယျ။၇.၁၀. ၂၀၁၉ ရကျနမှေ့ာ အဆိုတျော ဖွိုးပွညျ့စုံ အပါအဝငျ အမြိုးသားသုံးဦးကို မူးယဈတပျဖှဲ့က တရားလိုပွု တိုငျတနျးမှုကွောငျ့ဗဟနျးရဲစခနျးမှာ ဖမျးဆီးထိနျးသိမျးထားခွငျးခံခဲ့ရတာပဲ ဖွဈပါတယျ။ဖမျးဆီတဲ့ အခြိနျတုနျးကလညျး လူအမြားရှမှေ့ောကျမှာ ရိုကျနှကျပွီး ဖမျးဆီခဲ့တာပဲ ဖွဈပါတယျ။ ဖွိုးပွညျ့စုံက သူ့လကျထဲမှာ ရှိတဲ့ ဆေးပွားတှကေ မူးယဈဆေးဝါးမြားမဟုတျကွောငျးငွငျးဆိုခဲ့ပီး ခုအခြိနျမှာတော့ အပွဈမှ လှတျမွောကျခဲ့ပွီပဲ ဖွဈပါတယျ။
ဦးအောငျရငျက မတရားခံခဲ့ရတဲ့ အဆိုတေိာဖွိုးပွညျ့စုံနဲ့ သူငယျခငျြး တို့အတှကျ သူတို့ကို မတရားအနိုငျကငျြ့တဲ့သူတှကေို အရေးယူဖို့ပွောထားတာပဲ ဖွဈပါတယျ။အဆိုတျောဖွိုးပွညျ့စုံ တို့ သုံးယောကျအတှကျ ခံပွငျးနတေဲ့ အဆိုတျော ဦးအောငျရငျ ရဲ့အကွောငျးကို ပရိသတျတှေ သိရလောကျပွီထငျပါတယျ။ကွညျ့ရှုပေးကွတဲ ပရိသတျကွီးကို ကြေးဇူးအထူးတငျရှိပါတယျနျော။
လတ်တလော အနုပညာလောကသာမက မြန်မာတစ်နိုင်ငံလုံးမှ ပရိသတ်တွေ ကြားမှာ နာမည်ကြီးသွားတဲ့ အဆိုတော် ဖြိုးပြည့်စုံ ဆေးအမှု့နဲ့ ဖမ်းဆီခံခဲ့ရတဲ့ သတင်းကို ပရိသတ်တွေ သိလောက်မယ် ထင်ပါတယ်။ အဆိုတော် ဖြိုးပြည့်စုံ ဘန်ကောက်မှဝယ်လာတဲ့ ပူရှိန်းသကြားလုံးဘူးကို မှုးယစ်ဆေးလို့ ယူဆပြီး ဖြိုးပြည့်စုံနဲ့ သူငယ်ချင်း နှစ်ဦးကို မြန်မာပလာဇာ မှာ မှားယွင်းဖမ်းဆီခံခဲ့ရတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ဖမ်းဆီတဲ့အခါမှာလည်း လူအများရှိမှာ ရိုက်နှက်ပြီး ဖမ်းဆီခဲ့တာပါ။ ၉.၁၀.၂၀၁၉ မှာတော့ အဆိုတော်ဖြိုးပြည့်စုံ တို့ သုံးဦး ကို အပြစ်မရှိတာကြောင့် လွတ်ငြိမ်းပေးလိုက်တာပါ။ ချစ်ပရိသတ်တွေအတွက် အဆိုတော်ဖြိုးပြည့် စုံတို့သုံးယောက်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ပြောလာတဲ့ အဆိုတော် ဦးအောင်ရင်တို့ အကြောင်းကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်နော်။
ဦးအောင်ရင် က “အပြစ်မရှိတဲ့ ဖြိုးပြည့်စုံတို့ ၃ ယောက်ကို မူးရစ်ရမ်းကား ရိုက်နှက်ဖမ်းတဲ့ကောင်တွေ အရေးယူပေးဖို့တောင်းဆိုပါတယ်တာဝန်ချိန်မှာအရက်နံ့တတထောင်းထောင်းနဲ့လူကြားထဲမှာအခွင့်မရှိရိုက်ဖမ်းပြီးသူ့ကိုမှတ်ထားပြောသေးတယ်ဆိုတော့ သိပ်လွန်သွားပြီ ဒီ လူမဆန်တဲ့ကောင်တွေကိုပြင်းထန်စွာအရေးယူပေးပါ ဒီလိုကောင်တွေရဲတပ်ဖွဲ့ထဲရှိနေရင် ပြည်သူတွေအတွက်အန္တရယ်ကြီးပါတယ် ရဲတပ်ဖွဲ့လည်းသိက္ခာကျပါတယ် ” ဆိုပြီးပြောထားပါတယ်။၇.၁၀. ၂၀၁၉ ရက်နေ့မှာ အဆိုတော် ဖြိုးပြည့်စုံ အပါအဝင် အမျိုးသားသုံးဦးကို မူးယစ်တပ်ဖွဲ့က တရားလိုပြု တိုင်တန်းမှုကြောင့်ဗဟန်းရဲစခန်းမှာ ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းထားခြင်းခံခဲ့ရတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ဖမ်းဆီတဲ့ အချိန်တုန်းကလည်း လူအများရှေ့မှောက်မှာ ရိုက်နှက်ပြီး ဖမ်းဆီခဲ့တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဖြိုးပြည့်စုံက သူ့လက်ထဲမှာ ရှိတဲ့ ဆေးပြားတွေက မူးယစ်ဆေးဝါးများမဟုတ်ကြောင်းငြင်းဆိုခဲ့ပီး ခုအချိန်မှာတော့ အပြစ်မှ လွတ်မြောက်ခဲ့ပြီပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ဦးအောင်ရင်က မတရားခံခဲ့ရတဲ့ အဆိုတေိာဖြိုးပြည့်စုံနဲ့ သူငယ်ချင်း တို့အတွက် သူတို့ကို မတရားအနိုင်ကျင့်တဲ့သူတွေကို အရေးယူဖို့ပြောထားတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။အဆိုတော်ဖြိုးပြည့်စုံ တို့ သုံးယောက်အတွက် ခံပြင်းနေတဲ့ အဆိုတော် ဦးအောင်ရင် ရဲ့အကြောင်းကို ပရိသတ်တွေ သိရလောက်ပြီထင်ပါတယ်။ကြည့်ရှုပေးကြတဲ ပရိသတ်ကြီးကို ကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်နော်။
Previous Previous post: ပရိသတျတှအေထငျလှဲနကွေတဲ့ နခွေညျဦးနဲ့ ပနျးစညျးတူနတေဲ့အကွောငျးကို ရှငျးပွလာတဲ့ စိုငျးစိုငျး
Next Next post: သီခငျြးသဈထဲက စာသားတဈခြို့ကို ခဈြဇနီးလေးကို ဆိုပွနတေဲ့ ရှထေူး(ရုပျသံ)
ကိုခငျလှိုငျက ဖားဆနျပွုတျ စားခငျြတယျလို့ စလိုကျတာ စင်ျကာပူကနေ ပါဆယျဝယျခဲ့ပေးတဲ့ အေးမွတျသူ
Published: October 4, 201910:26 am
တီးလုံးသံကွားပွီး နိုငျငံခွားက မွို့လယျခေါငျမှာ ထ က ခဲ့တဲ့ ဖွူဖွူထှေး(ရုပျသံ)
Published: October 9, 20192:34 am
ပရိသတျတှအေားကသြှားစမေယျ့ ကဈြလဈတဲ့ဘျောဒီကိုထုတျပွလိုကျတဲ့ ဝါဆိုမိုးဦး
Published: October 4, 20193:58 pm
နှင်းဝတ်ရည်သောင်း ရဲ့ ကမ်းခြေမှာ ဆွဲဆောင်မှုအပြည့်နဲ့ အမိုက်စား ပုံရိပ်တွေ
Published: October 7, 201911:17 am
UK ကို ခရီးသွားနေတဲ့ Crush လေးကို ခရီးမှာ ပျော်ရွှင်ပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးလိုက်တဲ့ ပိုင်တံခွန်
Published: October 9, 201911:19 am
မြမြရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားမှာ ပါဝင်မရိုက်ဖြစ်တော့တဲ့ အကြောင်းအရင်းကို ပြောပြလာတဲ့ ဖြိုးမြတ်အောင်(ရုပ်သံ)
Published: October 4, 20198:09 am
မကျြစိနဲ့ လညျပငျးကငျဆာဝဒေနာကို ခံစားနရေတဲ့ဆရာတျောကွီးအတှကျ ကိုယျတိုငျကိုယျကြ သှားရောကျလှူဒါနျးခဲ့တဲ့ ပကျထရဈရှာတို့ မိသားစု
Published: October 2, 20193:18 pm